Fitaovana atoro anao: telegrama sy charger | Vaovao IPhone
Ny mpamaky sasany dia tsy faly amin'ny charger de la vie sy tariby, tian'izy ireo ny tranga nefa tsy matoky izy ireo ny hanao simba amin'ny iPhone miaraka amina charger DealExtreme mora vidy, tsy nanana olana izahay, fa tsy miahiahy izahay fa hisy hahatsapa bebe kokoa azo antoka amin'ny marika matoky, Izany no antony hanoloranay ho anao andian-tariby sy charger amin'ny vidiny lafo nefa miaraka amina kalitao azo antoka.
Izy rehetra dia azo vidiana amin'ny Amazon, Amazon.com dia manolotra volana fitsarana miaraka amin'ny fandefasana maimaim-poana 2-3 andro ary avy eo dia misy fandefasana mora vidy tokoa. Manoro hevitra izahay ny handray ny fandefasana premium mba hanana maimaim-poana, mandoa izany aorian'ny fividianana roa.
Hama charger - «Piccolino» charger USB, 100 - 240 V, 5 V, Mainty: charger kely toy ny iPhone tonga lafatra amin'ny fampiasana isan'andro sy handehanana eny an-dalana.
Charger Philips DLA96464 / 10, Black, 153 g, 38 x 145 x 88 mm: miaraka amin'ny tondro LED, famolavolana tena tsara sy mpampitohy izay miondrika mba hisorohana ny habaka.
Duo Kensington PowerBolt: Car charger misy input USB 2 ho an'ny iPhone, iPad, iPod, sns. avy amin'ny marika Kensington fanta-daza mba hahafahanao miala sasatra mora amin'ny famandrihana ny iPhone ao anaty fiara.
Charger Belc Belkin Usb Sync: tariby mainty tsotra avy amin'ny marika matoky toa an'i Belkin.
Tariby vovoka: tariby fotsy, tena mitovy amin'ilay entin'ny iPhone, raha sanatria very ny anao dia vaky na mila soloina ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fitaovana IPhone » Fitaovana atoro anao: telegrama sy charger